भारतले रोक्यो एघार ट्रक चिया
6550 पटक पढिएको
२७ वैशाख, झापा । भारतीय अवरोधका कारण पूर्वीनाका काँकडभिट्टावाट एक सातादेखि तयारी चियाको निर्यात हुन सकेको छैन ।
चियाको गुणस्तर परीक्षणलाई झण्झटिलो बनाएर भारतले अवरोध गरेपछि चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना भएको हो । हाल भन्सार जाँचपास भएका ११ वटा ट्रक एक सातादेखि भारतीय भन्सार पानीट्यांकीमा रोकिएको चिया विस्तार योजना, फिक्कलका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार गुणस्तर नेपालवाट तयारी चिया कोलकातास्थित ‘सेन्ट्रल फुड ल्याबोरेटरी’ मा नमूना परीक्षण गराएपछि मात्र निर्यातको इजाजत दिने गरिएको छ । “झण्झटिलो प्रक्रियाले नेपाली चिया निर्यातमा समस्या सिर्जना भएको छ”, उनले भने, “यसले नेपाली किसान र व्यापारी दुवै मारमा परेका छन् ।”
पानीट्यांकी भन्सारमा रोकिएको ट्रकमा १७ हजार किलोभन्दा बढी तयारी चिया रहेको व्यवसायी रोशन अग्रवालले जानकारी दिए। “चिया बोकेको ट्रक वर्षाका बेला खुला ठाउँमा राख्दा चियाको गुणस्तर बिग्रिन्छ”, उनले भने, “निर्यात रोकिँदा ठूलो नोक्सान हुन सक्छ ।”
अहिले ट्रकैपिच्छेको नमूना कोलकाता पठाएर गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था भारतले लागू गरेपछि चिया निर्यात रोकिएको अग्रवालले जानकारी दिए ।
एकपटक चियाको नमूना परीक्षण गराउँदा भारु २५ हजार खर्च लाग्ने गरेको छ । भारत निर्यात हुने चिया मात्रै होइन, तेस्रो देश निकासीका लागि भारतीय भन्सार पुगेका चियाका ट्रक पनि रोकिएका छन् ।
प्रहरी प्रतिष्ठान टेन्डरको मस्यौदा भारतमै तयार
पार्टी बचाउन आफू अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने र नसकिए पार्टी फुटाउने ओलीको चेतावनी !
पढ्नुहोस्, यसरी जान्छ भेल पहिरो !
बागलुङमा क्वारेन्टिनमा रहेका १ जना युवकको मृत्यु
गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा आगलागी : ८ माइक्रोबस जले, ४ आंशिक क्षति
कतै नगएका व्यक्तिमा समेत कोरोना देखिएपछि राजधानी उच्च जोखिममा
संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिबाट कोरोना सर्छ की सर्दैन ?
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र मलाई दुवै पदबाट हटाउने षड्यन्त्र भयोः ओली
प्रधानमन्त्रीको नवगठित एमाले कनेक्सन